အသုံး၀င်ပြီးကောင်းတဲ့ download express ဆော ့၀ဲပါ . — MYSTERY ZILLION
အသုံး၀င်ပြီးကောင်းတဲ့ download express ဆော ့၀ဲပါ .
အသုံး၀င်ပြီးကောင်းတဲ့ download express ဆော ့၀ဲပါ .။ speed ကိုလိုသလို မြှင့်တင် နိုင်ပြီး Internet download manager လိုပဲ ကောင်းမွန် ပါတယ် ။ သူရဲ ့အကောင်းတာ တခုကတော့key တွေ crack တွေ မလိုပဲ free ရယူနိုင်ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့သူ ကို မန်မိုရီ စတစ် ထဲ မှတောင် သိမ်းမထားပဲ သုံးချင်ပြီဆိုတော ့မှ google ကနေ download express လို ့ရှာလိုက်တာပါပဲ ။ ပြီးရင် သူ့ကိုဒေါင်းလော့ဆွဲ တယ် install လုပ်ပြီးတာနဲ့mozilla မှာ restart ချခိုင်းပါတယ်..။ ပြီးရင်တော့ အဆင်သင့် သုံးနိုင်ပါပြီ ။ သူ ့ရဲ့မူရင်း7threads သာပါရှိပေမယ့်512 ထိ မြှင့်တင်နို်င်ပါတယ် ။ threads မြှင့်ပုံကတော့ဒီလိုပါ setting >>> connection ကိုသွားပါပြီးလျှင် Please enter setting for each speed mode မှာ hight ကိုပြောင်းပါ..ပြီးလျှင်7htreads ကနေ 512 threads ထိ ကြိုက်ရာ မှာထားပြီး ok နှိပ် လိုက် ပြီး ပါက အဆင် သင် ့သုံးနိုင်ပါပြီ ။ မိတ်ဆွေများအားလုံး စမ်းသပ် သုံးကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် ။ လွယ်ကူ ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင် စွမ်းအားမြင့်မားတဲ့အတွက် အားလုံးအသုံး၀င်ကြမှာပါ.........။ ဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ် .....။
Download တော့ဆွဲပြီးသွားပြီ ဒါပေမယ့် သေသေချာအင်စတောလုပ်နည်းမသိလို့ မလုပ်ရဲဘူး:D